प्रेम दिवसको अवसरमा सन्तोषले ल्याए ‘के यो माया हो’, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
प्रेम दिवसको अवसरमा सन्तोषले ल्याए ‘के यो माया हो’
काठमाडौं । भोलि (बुधबार) १४ फेब्रुअरी अर्थात प्रेम दिवस । युवापुस्ताम बढी लोकप्रिय यो दिवसलाई नयाँ प्रेमी प्रेमीकाले प्रेम प्रस्ताव राख्ने दिनका रुपमा लिने गरेका छन् ।
विशेषगरी यो दिवसमा गुलावको फूल उपहार दिएर प्रेम आदान प्रदान गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपाली सांगितिक क्षेत्रका कलाकाहरुले पनि यो दिवसलाई लक्षित गरी प्रेमिल गीतहरु सार्वजनिक गर्ने प्रचलन बढेको छ ।
यसैक्रममा गायक सन्तोष लामाले ‘के यो माया हो’ बोलको गीतको भिडियो रिलिज गरेका छन् । रोहित बस्नेतको शब्द, सुविर पन्तको संगीत रहेको रहेको यो गीतको भिडियोमा आशिष पुरुष र सारिका सुनार फिचरिङ छन् । एक युवाले एक युवतिलाई देखाएको प्रेम भाव उठाएको भिडियोको निर्देशन रोहित विक्रम कार्कीले गरेका हुन ।
सुरेश राउतको सम्पादन रहेको भिडियोलाई रोहित विक्रमले नै खिचेका हुन ।